Shuaban-biyood Dadkii ugu Badnaa ku soo Ritey Degmada Xarfo (dhegayso) – Radio Daljir
Juunyo 18, 2017 7:56 b 0
Degmada Xarfo ee gobolka Mudug waxaa ka dilaaay xanuunka shuban biyoodka. Inta laxaqiijiyay shuban biyoodka ayaa soo ritay ku dhwaad boqol qof ,halka MCH ka ay ujifaan dad garaya 60 qof sida uu Radio Daljir usheegay Gudomiayaha Xarfo Bashiir Macalin.
Gudoomiyaha ayaa sido kle sheegay in ilaa iminka ay tobon qof ay u dhimatay xanuunka ilaa horaanti bishaan. Xanuunka shuban biyoodka ayaa ka dilaacay muddo saddex todobaad ah. Zubeyr Shiikh ayuu u waramay Gudoomiyaha Xarfo